တရုတ်အပေါ်ယံပိုင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းရေစိုခံအစာရှောင်ခြင်းတင်းမာရော်ဘာကတ္တရာစေးမှုတ်ဆေးဘူး | Hongyuan
အကောင်အထည်ဖော်ရေးစံ: src ရော်ဘာကတ္တရာစေးရေစိုခံအပေါ်ယံပိုင်း hardening အစာရှောင်ခြင်းကိုလေပေါ်မှာပ Q0783WHY006-2017
Biogo-src ရေစိုခံအပေါ်ယံပိုင်းအထူးလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်ပိုလီမာနှင့်အထူးရိုက်ကူးရေးအေးဂျင့်များနှင့်အတူပြုပြင်ထားသော emulsified ကတ္တရာစေးရောစပ်ခြင်းဖြင့်ဖန်ဆင်းသောမြင့်မားသော elasticity, ချေးခံနိုင်ရည်, Anti-seepage နှင့်နည်းစနစ်မှုန်ရေမွှားရေစိုခံအပေါ်ယံပိုင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်ဆန်စွာ-hardening ရော်ဘာကတ္တရာစေးကိုလေပေါ်မှာ;
လျှောက်လွှာအချိုးအစား ပစ္စည်းဖြေပစ္စည်း B က = 50: 1
mass ဖြေ 50Kg, ပစ္စည်း B ကို: 10KG
ဆေးတခါသောက် 1mm 1.82kg / ㎡
3.ကုန်ပစ္စည်း features တွေ
①မြင့်မား elongated 1000% အထိနှင့် elasticity ပွနျလညျထူထောငျမှုနှုန်းအခြေခံအဆောက်အဦးပုံပျက်သောမှ 90% နှင့်မြင့်မားအလိုက်အထိုက်နေတတ်မှတက်;
②အစိမ်းရောင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်-friendly: ကပက်ဖြန်းနှင့် application မှကုန်ကြမ်းထုတ်လုပ်မှုမှရေ-based, အနံ့, Non-အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ပြီး, ထို့ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်-ဖော်ရွေပစ္စည်းမျိုးဆက်သစ်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်,
လြယ္ကူလုပ်ကိုင်ရန်③: နည်းစနစ်အစာရှောင်ရုပ်ရှင်မှ, လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူခြင်း, 1000-2000m2 မှတက်ဆောက်လုပ်ရေးစွမ်းရည်နှင့်အလုပ်လုပ်ကာလကိုအတိုကောက်မှထိရောက်သော;
တဦးတည်းအတွက်④အားလုံးလုပ်ဆောင်ချက်များကို: ရေခုခံပေါင်းစပ်ချေးခုခံ, seepage ခုခံ, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်တုန်ခါမှုခုခံရေးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောစက်မှုဇုန်နှင့်အရပ်ဘက်အဆောက်အဦးများအဖြစ်အများအပြားလယ်ကွင်း, စည်ပင်သာယာအင်ဂျင်နီယာနှင့်ရေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဆောက်အဦးများသက်ဆိုင်;
⑤တစ်ခွင်လျှောက်လွှာ: ကမြင့်မားတဲ့အပူချိန်နဲ့အအေးဒေသများသက်ဆိုင်သည်, -35 ℃မှာကိုချိုးဖျက်မဟုတ်သလို 140 ℃မှာစီးဆင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုသို့သောအားဖြည့်ကွန်ကရစ်, သံမဏိ, ကျွန်းသစ်နှင့်အရောင်သံမဏိအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေခံမျက်နှာပြင်ပေါ်ဖျန်းနိုင်ပါသည်။
4. တစ်ဦးက pplicable နယ်ပယ်
ရေစိုခံတာ, seepage ခုခံနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောမြေအောက်အင်ဂျင်နီယာနှင့်ခေါင်မိုး, မြို့ရိုး, အသစ်နှင့်အဟောင်းအဆောက်အဦး၏အိမ်သာ၏အစိုဓာတ်ကိုခုခံဖို့သက်ဆိုင်သော;
ယခင်: Cementitious ဆံချည်မျှင်သွေးကြောပုံဆောင်ခဲရေစိုခံတာအပေါ်ယံပိုင်း
နောက်တစ်ခု: စတင်မြင့်မားတဲ့သိပ်သည်းဆ polyethylene မိမိကိုယ်ကိုကော်ရေစိုခံအမြှေးပါး
နှစ်ချက်စိတျအပိုငျး Polyurethane waterproof Coating
တဦးတည်းစိတျအပိုငျး Polurethane waterproof Coating
ပူး waterproof Coating
လူပျိုစိတျအပိုငျး Polyurethane waterproof Coating
Valeron Cross-ပုံစံရုပ်ရှင် Self-ကော် bitume ...
Flexible Polymer အမျိုးအစား-ဘိလပ်မြေ waterproof Coating , ရေတပ်စခန်း Polyurethane waterproof Coating , Tpo ရေစိုခံအမြှေးပါး, ကွန်ကရစ်သည် Polyurethane Coating , acrylic waterproof Coating, Single-သက်တမ်းထပ်တိုးခေါင်မိုးအမြှေးပါး ,
ကွန်ကရစ်သည် Polyurethane Coating , acrylic waterproof Coating, Tpo ရေစိုခံအမြှေးပါး, Flexible Polymer အမျိုးအစား-ဘိလပ်မြေ waterproof Coating , ရေတပ်စခန်း Polyurethane waterproof Coating , Single-သက်တမ်းထပ်တိုးခေါင်မိုးအမြှေးပါး ,